कालो CEOs: परिभाषा, विधि, प्रविधी र सुविधाहरू
इन्टरनेट - सबै छ। सायद, बस ताकि तपाईं आधुनिक संसारमा यसको महत्त्व बारेमा भन्न सकिन्छ। आखिर, एक व्यक्ति एक प्रश्न छ भने, त्यो वेब मा उत्तर खोजी गर्न थाल्छ। र केवल ती साइटहरूलाई खोज मा शीर्ष स्थान कब्जा गरेको ध्यान संग सम्मान गरिनेछ। तसर्थ, साइटहरु को सबै मालिक बीच त्यहाँ खोज पृष्ठमा स्थानको लागि कडा प्रतिस्पर्धा छ।
वेबमास्टर्स प्रतियोगिता पिटे गर्न विधिहरू विभिन्न प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई केही तिनीहरूले फिल्टर अन्तर्गत स्रोत ड्राइव गर्न सक्छन् किनभने एकदम खोज इन्जिन spiders र केही धेरै जोखिमपूर्ण द्वारा, लिइएको भइरहेका छन्। कालो एसईओ, वा कालो अनुकूलन - यी प्रविधी केही। तिनीहरूलाई मा लेखमा छलफल गरिनेछ।
अनुकूलन के छ?
तपाईं कालो सीईओ सिक्न सुरु गर्नु अघि, तपाईं के साइट अनुकूलन र के छ को एक सामान्य विचार हुनुपर्छ। वेबसाइट अनुकूलन - खोज इन्जिन पदोन्नति स्रोत, एक विशेष प्रश्न पृष्ठ लागि खोज मा पहिलो स्थान कब्जा गर्नेछ जो जटिल प्रविधी एक प्रकारको, को एउटा तरिका हो।
अनुकूलन आन्तरिक र बाह्य छ। सामग्रीको आन्तरिक अनुकूलन (पाठ, ग्राफिक्स, र मिडिया फाइलहरू) समावेश गर्न। बाह्य अनुकूलन लिंक भवन छ। कि, स्रोत समान विषयवस्तुहरू अन्य वेबसाइट लिङ्क हुनुपर्छ छ। पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ कोर र प्रमुख प्रश्नहरु को चयन सिर्जना छ। सामान्यतया अनुकूलन - लामो, समय-खपत र निरन्तर प्रक्रिया। तर तपाईं नियम अनुसार सबै भने, त्यसपछि ढिलो होस् वा चाँडो साइट खोज परिणाम मा एक अग्रणी स्थिति कब्जा हुनेछ।
तर, त्यो प्रक्रिया गति मदत विधिहरू छन्। यो तथाकथित कालो र खैरो एसईओ एसईओ। अनुकूलन विभिन्न प्रकारका कस्तो भिन्नता छ?
एसईओ को प्रकार
मालिक आफ्नो स्रोतहरू प्रमोट कसरी आधारमा, एसईओ-अनुकूलन धेरै प्रजातिहरू भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
सेतो एसईओ-अनुकूलन। स्रोत प्रचार सबैभन्दा इमानदार विधि। साइट स्वाभाविक र बिस्तारै प्रगति भएको छ।
खैरो एसईओ-अनुकूलन। पदोन्नति को विधिहरू सबैभन्दा इमानदार छैन, तर, निषेधित छैन मुख्य कुरा हो - यो ज्यादा छैन।
सुन्तला एसईओ-अनुकूलन। यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि हालतमा यातायात प्राप्त छ। यो जो लक्षित दर्शक छैन आगंतुकों आकर्षित गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ, र किवर्ड छन् कि स्रोत को विषय सान्दर्भिक छैन थप्दा।
कालो एसईओ-अनुकूलन। यो धूर्त विभिन्न विधिहरू खोज इन्जिन झुक्याउन र शीर्ष मा स्रोत ल्याउन मद्दत गर्छ कि आधारित छ।
, सेतो खैरो र कालो एसईओ बीच मतभेद बुझ्न, तपाईं आफ्नो कामकाज को विशिष्ट उदाहरण peculiarities विचार गर्न आवश्यक छ।
पहिले नै उल्लेख, यो वेबसाइट पदोन्नति को कानूनी तरिका छ। तपाईं उदाहरणात्मक उद्देश्यका लागि एउटा उदाहरण ल्याउन सक्छ। एक स्रोत निर्देशिका साइटहरु मा अर्डर यातायात प्राप्त गर्न दर्ता गरिएको छ मानौं। यो निर्देशिका एक उच्च टिक छ र विषय साइट पारस्परिक रहेको छ। यस्तो दर्ता यसलाई यातायात बढ्छ र बाह्य सन्दर्भ ठूलो साइटमा वजन भन्छन्, खोज इन्जिन द्वारा प्रतिबन्धित छैन।
दोस्रो परिदृश्य यस जस्तो थियो: एउटै स्रोत लिंक भवन को प्रयोजन को लागि वेबसाइट को निर्देशिका मा दर्ता गरिएको छ। अक्सर यी निर्देशिका एकदम विषय मिलेन गर्न सक्छन्, तर यो खोज इन्जिन निषेध छैन।
वास्तवमा, त्यहाँ सेतो र खैरो अनुकूलन मा फरक। यो स्रोत मालिकको नैतिक चरित्र र निष्ठा थप निर्भर गर्दछ। खोज इन्जिन लागि, यी प्रक्रियाहरू कुनै फरक छन्।
यहाँ पदोन्नति को विधिहरू स्तर मा स्रोत स्थिति मा एक प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ, र तिनीहरूलाई को भन्दा खोज इन्जिन द्वारा प्रतिबन्धित छन्। यस्तो विधि खोजशब्दों संग लिंक को खरीद समावेश वा प्रयोग खोज इन्जिन र आगंतुकों विभिन्न जानकारी हेर्न जब क्लोकिङ छ सक्छ।
तपाईं निर्देशिका मा दर्ता साइटमा एउटा उदाहरण दिन भने, त्यसपछि केवल 40,000 क्याटलग को डेटाबेस मा प्राथमिक स्रोत लिङ्क avtoprogon कालो अनुकूलक आदेश। यो सूची रेकर्ड गर्न सकिन्छ, तर यो बेला अनुक्रमणिका स्रोत वेब crawlers भ्रममा स्पष्ट प्रयास देखाउँछ। लागि यस्तो मूलतः प्रतिबंध हुँदैन, तर पनि यो एक सानो लाभ उठाउन।
Receptions कालो सीईओ
त्यसैले, कालो एसईओ के हो? यसलाई निषेधित विधिहरू प्रयोग गरेर आफ्नो साइट प्रवर्द्धन गर्न एक तरिका हो। यो खोज प्रविधिको अनुसन्धान र विकास संलग्न छन् जो व्यापार एक प्रकारको छ। तिनीहरूलाई आधारित जसको मुख्य उद्देश्य luring छ आगंतुकों र प्रदर्शन विज्ञापन सामग्री मोनेटाइज गर्ने साइटहरु छन्। र थप हामी खराब खोज प्रविधि बारे थाहा छ, खोज इन्जिन काम।
अब म उनि प्राय खोज एल्गोरिदम अद्यावधिक किन बुझ्न।
तर कुनै कुरा तिनीहरूले अद्यावधिक छन् कति छैन, त्यहाँ सधैं काम7काला एसईओ प्रविधी हुनेछ:
पाठ लुकाउनुहोस्। एक स्रोत बढाउन क्लासिक तरिका। यसको सार तथ्यलाई मा निहित प्रयोगकर्ता लुकाउनुहोस् पाठ, प्रमुख माग संग replete छ। यो गर्न, सानो फन्ट प्रयोग गर्न वा पृष्ठभूमि रङ बिल्कुल समान र अक्षरहरू छ। पर्यटकहरू तिनीहरूलाई लागि मात्र आवश्यक जानकारी देखिने छन्, र खोज इन्जिन spiders खोजशब्द प्रश्नहरु को एक प्रशस्त सक्दछन्।
क्लोकिङ। स्रोत सामग्री दुई प्रकार छन् जब यो छ: एक उपयोगी र आकर्षक -, प्रयोगकर्ताहरूले गर्न, अन्य अप्रासंगिक, र किवर्ड को एक प्रशस्त संग - खोज इन्जिन लागि।
अदृश्य लिंक। एङ्कर हुन् भनेर मानिसहरूलाई देखिने छैन विराम वा थम्बनेल चित्र प्रयोग गरेर, सन्दर्भ ठूलो वृद्धि गर्न।
Doorway। को शाब्दिक अनुवाद "अगाडि ढोका।" कम गुणस्तर स्रोतहरू सिर्जना र प्रयोगकर्ता बस तिनीहरूलाई लागि डिजाइन गरिएको छ कि एक वेबसाइट पुनः निर्देशित छन् कि, माथि तिनीहरूलाई प्रचार को सिद्धान्त आधारित कालो एसईओ पदोन्नति। पनि आज, यो विधि सक्रिय प्रयोग गरिन्छ।
Linkfarming। एक पुरा नेटवर्क स्रोत उल्लेख आपसमा कुरा भनेर सिर्जना जो पदोन्नति को एक विधि। तथाकथित पारस्परिक लिंक भवन।
बसे। सुविधाहरू कालो एसईओ-पदोन्नति स्रोतको नेटवर्क नेतृत्व मा मुख्य साइट प्रचार मदत गर्न सिर्जना गर्न छन्। प्राथमिक साइट नै स्रोतहरू बुझाउँछ र पछि, यसरी, सबै उपग्रहहरु पहिलो खोज पृष्ठ मा हुनुहुन्छ।
स्वचालित दर्ता। साइट अफलाइन विशेष क्याटलग र लिंक आदानप्रदान मा रेकर्ड गरिएको छ।
तरीकाहरु बारेमा अलि बढी
अब त्यस्तो कालो सीईओ कि स्पष्ट छ। माथि प्रस्तुत विधिहरू - कालो प्रविधि प्रगति मा मात्र व्यक्तिहरूलाई छैनन्। त्यहाँ शीर्ष7मा समावेश नभएका धेरै प्रविधी हो:
Spamdeksing। यो विधि खोज इन्जिन रोबोट मा केवल केन्द्रित छन् पृष्ठहरू सिर्जना छ। तिनीहरूले जानकारी निरक्षरता र किवर्ड को एक ठूलो संख्या मा फरक। जहाँ यी किवर्ड सधैं साइट को विषय सम्बन्धित छन्, र जो आगंतुकों आकर्षित (तर तिनीहरूलाई पकड छैन) उच्च मागका छन्।
गमागमन। यो प्रविधी एक-दिन साइटहरु लागि राम्रो अनुकूल छ। यसको सार बित्तिकै साइट खोज इन्जिन द्वारा अनुक्रमणिका जान्छ र पहिलो स्थिति ओगटेको रूपमा, सामग्रीहरू पूर्णतया परिवर्तन भन्ने तथ्यलाई मा निहित। र खोज इन्जिन वेबसाइट द्वारा अर्को अनुक्रमणिका सम्म एक अग्रणी स्थिति ओगटेको छ। यो प्रविधी अक्सर अल्पकालीन परियोजनाका लागि प्रयोग गरिन्छ। यस्ता साइटहरू, एक-दिन पुतलीहरु, आफ्नो जीवन भनिन्छ हुनत उज्ज्वल, तर छोटो।
कालो अनुकूलन को प्रयोग
उपयोगी केहि छैन कि एक स्रोत बढाउन एक घृणित तरिका हो - यो लामो कालो सीईओ कि छाप थियो। केही महिनापछि, साइट फिल्टर अन्तर्गत पतन, र सबै कार्य नाली जान्छ। तर गुणस्तर सामग्री सिर्जना मदत प्रविधी छन्। त्यहाँ जब तपाईं प्रयोगकर्ता पाठ को एक निश्चित भाग लुकाउन आवश्यक परिस्थिति हो। शैली: यस मामला मा, तपाईं «कुनै पनि प्रदर्शन» प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिबंध लागि यो पालना गर्दैन, हुनत खोजशब्द को वजन अलिकति कमी।
ब्लक तत्व काम गर्नेहरूलाई, शैली फाइदा लिन सक्छ «पाठ-इन्डेन्ट: -1000em» आवश्यक छ भनेर सबै लुकाउन, तर सामग्री हेर्दै हस्तक्षेप। उपयोगी कुरा प्रयोग गर्न ट्याग «noframe» र «noscript» हुनेछ। तिनीहरूले लिङ्क राख्नु भने, प्रयोगकर्ता पनि आफ्नो अस्तित्व बारेमा अनुमान छैन, तर खोज इन्जिन नोटिस हुनेछ। मालिक आफ्नो साइट सान्दर्भिक लिंक मा राख्न चाहन्छ जब यो विधि सान्दर्भिक छ। उहाँले यातायात हुन्छ, पृष्ठ वजन साझेदार वेबसाइट फेरबदल र प्रयोगकर्ता बस सामग्री हेर्दै आनन्द।
परित्याग वा छैन?
सबैभन्दा, एसईओ categorically कालो CEOs प्रयोग विरुद्ध फिल्टर गर्न साथै, खोज इन्जिन पूर्ण खोज सूचकांक बाट एउटा साइट बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ किनभने। कालो अनुकूलन खोज इन्जिन को व्यवस्थापन बाहिर छन् भनेर एक स्रोत प्रविधी को पदोन्नति मा केंद्रित। SEOs उपयोगी र अद्वितीय सामग्री वेबसाईटहरू टाउट गर्छन्, र प्रयोग केवल कानुनी विधि प्रवर्द्धन गर्न, छ, सेतो अनुकूलन।
तर यो स्वीकार गर्न गाह्रो छ। तपाईं तार्किक लाग्छ भने केही कालो एसईओ प्रविधी छैन त खराब हो, र तपाईं प्रतिबंध को डर बिना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, यो लुकेको पाठ र लिंक, क्लोकिङ र doorway जस्ता विधिहरू लागू हुँदैन। linkfarminga र उपग्रहहरु सिर्जना लागि, यो यसको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्न ठूलो रणनीति छ। तर केवल तिनीहरूले हात द्वारा गरिन्छ, र रोबोट द्वारा समायोजित छैन शर्त मा। यस मामला मा, कालो सीईओ सेतो मा उत्तेजित गर्दछ।
अनुकूलन मा, साथै व्यापार मा, तपाईं पनि हानि बनाउने उद्यम, लाभ हेर्न आवश्यक छ। को जस्तो देखिने असंगत विचार संयोजन र बुझ्न जहाँ यो सीमा बाहिर समाप्त हुन्छ। यस मामला मा, पनि कालो अनुकूलन तपाईं लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।
वेबसाइट संवर्धन - साइट अनुकूलन
खोज इन्जिन आफूलाई एक वेबसाइट र पदोन्नति सिर्जना
गर्मी प्रतिरोधी टाइल टाँसन वाला, आगो र धातु
महसुस तलवों हुक मा रोचक र व्यावहारिक चप्पल
बच्चाहरु मा MMD - के यो छ? न्यूनतम मस्तिष्क रोग
पाइप को स्थान: कसरी आफ्नै हातले ताप निजी घर व्यवस्थित गर्न
जाडोको लागि ब्लूबेरी कसरी फ्रिज गर्ने। स्वादिष्ट र स्वस्थ गृह निर्मित तयारी
भित्री भान्सा9वर्ग। एम। (फोटो)